सुत्न सक्दैनन् रवि हिरासतमा, छटपटीमै बित्छ रात ! – PanchKhal Online
Home/समाचार/सुत्न सक्दैनन् रवि हिरासतमा, छटपटीमै बित्छ रात !
रवि पक्राउ परेदेखि उनकी श्रीमती निकिता पौडेल चितवनमै छिन् । उनी केही सहयोगीसहित ग्लोबल होटलमा बसेकी छन् । उनी बिहान र बेलुका होटलबाटै खान बोकेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्छिन् । प्रतीक्षा कक्षमा प्रहरीसामू आफूले ल्याएको खाना चाख्छिन् । खानामा केही मिसाएको त छैन भनेर प्रहरीले बाहिरबाट ल्याएको खाना आफन्तलाई चखाउँछ । हिरासतमा रवि शान्त छन् । हिरासतमा रहेका अन्यसँग उनी घुलमिल हुन सकेका छैनन् ।
प्रायः उनी किताब पढेर बस्छन् । बेलुका त्यत्ति सुत्न सकेका छैनन् रवि । उनलाई निकिताले नै पुस्तक पु¥याउने गर्छिन् । बाहिर भएका विरोध प्रदर्शन लगायतका घ टनाबारे उनैले अपडेट गराउँछिन् । उनलाई भेट्न नेता, कलाकार र मानवअधिकारकर्मी पुगिरहन्छन् । उनीहरुसँग कुराकानी गर्छन् । कांग्रेसका केही नेता, कलाकार रामकृष्ण ढकाल लगायत उनलाई हिरासतमा भेट्न पुगेका थिए ।
अमेरिकादेखि चितवन हिरासतसम्म
नेपाली टेलिभिजनमा ‘यहाँको चलन’ लगायत मनोरञ्जन कार्यक्रम चलाउँदा चलाउँदै रवि लामिछाने अमेरिका हान्निए । उतै काम गरेर बसेका उनी छ वर्ष अगाडि नेपाल फर्किए । उनले न्युज २४ टेलिभिजनमा बुद्ध वाज वर्न इन नेपाल विषयमा ६२ घण्टा १२ मिनेटसम्म कार्यक्रम चलाएर विश्वमा सबैभन्दा लामो समयसम्म टक शो होस्ट गरेको विश्व कीर्तिमान बनाए ।
सो कार्यक्रमसँगै रवि स्वदेश फर्किएको शन्देस पनि गयो । उनी ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ बाट नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा देखिए । पटक पटक प्रधानमन्त्री बदलिइरहने समस्याले उनको यात्रा ब्रेक लाग्यो । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि उनले राखेकै नाममा अर्कैलाई सञ्चालक राखेर कार्यक्रम चलाएपछि उनी रूष्टहुँदै ‘सिधा कुरा जनतासँग’ नाममा नीजि टेलिजिन च्यानल न्युज२४ मा फर्किए।
प्रारम्भमा उनको कार्यक्रमले दर्शकको ध्यान तान्न सकेको थिएन । यूट्युवबाट समेत प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने, फेसबुकमा लाइभ आइरहने गर्दै उनले दर्शको ध्यान आफ्नो कार्यक्रतिर तान्न ताले । रोजगारीकोक्रममा विदेशिएर अलपत्र परेकाहरुको अवस्थाबारे रिर्पोटिङ बजाउन थालेपछि उनको कार्यक्रम लोकप्रिय हुन थाल्यो
होटलको कोठामै गएर छापा मार्ने, भक्तपुरमा भुत देखियो भन्दै रिर्पोटिङ गर्दा उनी विवादमा पनि आए । ‘घुमाएर, टुडिखेलमा नाँकको डाँडी भाँचिने गरी हान्ने’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्दा उनको प्रस्तुती शैली विवादमा आउन थाल्याे । विवादमा आए पनि उनको कार्यक्रम लोकप्रियहुँदै गयो ।
प्राय वैदेशिक रोजगारी र क्रसर उद्योगको बदमासीसँगै समसामयीक विकृती केन्द्रित कार्यक्रम र उनको आक्रामक शैलीले उनी लोकप्रियहुँदै गए । श्रम अनुमती नलिइ नेपालमा गैर कानुनी रुपमा काम गरेको आरोपमा डिर्पोटको तयारीहुँदा उनको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा समर्थकको ओइरो लागेको थियो । यसले उनकाे बढ्दाे लाेकप्रियता देखाएकाे थियाे । अहिले आ त्मह त्या दुरु त्साहनको आरोपमा चितवन प्रहरीको हिरासतमा रहँदा चितवनमा दैनिक प्रर्दशन नै भइरहेको छ ।
अष्टमी गुरुङको त्यो केस…
रविले आफ्नो कार्यक्रममार्फत विदेशमा रहेका नेपालीहरु केन्द्रित रहेर विभिन्न कार्यक्रम बनाए । कतिपय केसको फलोअप गर्न उनी आफैं सम्बन्धित देशमा पुगेका थिए । यस्तै एउटा केसलाई उनले जोडतोडका साथ उठाए र फलोअप गर्न उनी युएई नै पुगेका थिए । त्यो केस थियो, युएई पुगेकी गोरखाकी अष्टमी गुरुङको केस । अष्टमीको श व उनको कोठामा फेला परेको थियो । उनको मृ त्युपछि श व नेपाल ल्याउँदा ब्यागमा मोबाइल भेटियो । मोवाइलमा एउटा भिडियो क्लिपसमेत भेटियो जसमा उनले रुँदै आफ्ना आमाबाबुसँग माफी माग्दै ‘आफू काम गर्ने कम्पनीका सुपरभाइजर साइमन काजीले इज्जत लिलाम गरिदिएकोे’ उल्लेख थियो ।
त्यसैको आधारमा रविले अष्टमीलाई बंगलादेशी नागरिक साइमनले आ त्मह त्या गर्न बाध्य बनाएको र यो आ त्मह त्या नभई ह त्या भन्न सजिलै सकिन्छ भनेर दाबी गरे । आरोपीलाई राक्षस भन्दै पैरवी गरिरहे । त्यसको आधार उही मोबाइलमा फेला परेको भिडियो क्लिपै थियो । कार्यक्रमको फलोअप गर्न अबुधाबीमै पुगे । साइमनविरुद्ध मुद्दा चल्यो तर अदालतले उनले आ त्मह त्या गरेको र आरोपी निर्दोष रहेको ठहर गर्यो । संयोग, अहिले रविविरुद्ध उस्तै प्रकृतिको अपराधको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ तर उनी पूर्व सहकर्मीको आ त्मह त्या अगाडि भिडियो क्लिपलाई प्रमाण स्वीकार गरिरहेका छैनन् । शुक्रवार साप्ताहिकबाट
जनहितलाई केन्द्रमा राखेर काम नगरे सत्ता उल्टन सक्छ : अध्यक्ष दाहाल